Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho oo Gudoon Baarlamaanka ka codsaday in lasoo dadajiyo sharciga Maqaam Caasamida – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
by nairobi 9th July 2017 9th July 2017 055
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa khudbad ka jeediyay Kalfadhigii labaad ee Baarlamaanka, kaasoo maanta uu si rasmi ah u furay Madaxweynaha Soomaaliya.
Guddoomiye Taabid ayaa ugu horeyn sheegay in Baarlamaanka uu hor-yaalo howlo qaran oo culus, isagoo soo hadal qaaday arrinta Maqaamka Muqdisho iyo sida ay tahay in lagu helo, iyadoo loo marayo sida dastuurka qabo.
Waxaa uu sheegay in Muqdisho ay tahay Caasimadda, ayna ku nool yihiin in ku dhow 3 milyan oo ruux, waxaa uu xusay in nidaamka federaalka uu dhigayo in maqaam gaar ah ay yeelato, sida ku cad qodobka 9aad ee dastuurka.
“Maqaamka Muqdisho wuxuu ku dhismi karaa labo shaqo oo waa weyn, mid waa dib u eegista dastuurka iyo go’aan ka gaarista maqaamka magaalo madaxda dalka, go’aanka maqaamka iyo soo saarista sharciyadeeda gaarka ah wuxuu dusha u saaran yahay Xildhibaanada Golaha shacabka”ayuu yiri Guddoomiye Taabid.
Waxaa uu sheegay in maamulkiisa uu geed gaaban iyo geed dheer u fuuli doono wada tashiga qeybaha dadka reer Muqdisho uu xusay inay yihiin shacab adkeysi badan, dulqaad badan canshuurta bixiya, isla markaana diyaar u yihiin in gacan laga siiyo maqaamka dastuuriga ee loo ogol yahay magaalo madaxda Soomaaliya.
Arrinta Maqaamka Caasimadda ayaa aheyd mid muddooyinkii u dambeeyay si aad ah loo hadal hayay, iyadoo siyaasiyiin dhowr ay hor-boodayeen, sidii xuquuqda ka maqan Caasimada loo raadin lahaa.
Gobolka Banaadir ayaa tallaab u qaaday inuu helo mataaladii dhinaca siyaasada, iyadoo markii u horeysay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir uu miiska soo saaray matalaadii Gobolka ku lahaa shirarka lagu jaan-goynayo siyaasada dalka, halka Madashii horena ay ku xaqirnaayeen matalaadii shirarka.
Faah faahin: Maxaad kala Socotaa Qasaaraha ka dhashay Qarax Maanta ka Dhacay Suuq Xoolaha lagu Iibiyo ee ku yaal Dagmada Afgooye
Xubin sare oo Alshabaab qaraxyada u qaabilsanaay oo Ciidamada Ammaanka ay gacanta kusoo dhigeen
War Cusub: Maxaadan ogeyn oo Jowhar maanta ka dhacay???